‘ठेकेदारलाई कमिशनको लेनदेन गरेर कारवाही गर्नुको साटो कयौ ठेक्का दिनेहरुको नाम सार्वजनिक गरियोस्’ - Daily Lokmandu
Homeसमाचार‘ठेकेदारलाई कमिशनको लेनदेन गरेर कारवाही गर्नुको साटो कयौ ठेक्का दिनेहरुको नाम सार्वजनिक गरियोस्’
‘ठेकेदारलाई कमिशनको लेनदेन गरेर कारवाही गर्नुको साटो कयौ ठेक्का दिनेहरुको नाम सार्वजनिक गरियोस्’
August 9, 2018 समाचार Comments Off on ‘ठेकेदारलाई कमिशनको लेनदेन गरेर कारवाही गर्नुको साटो कयौ ठेक्का दिनेहरुको नाम सार्वजनिक गरियोस्’
घुम्यो फि¥यो कुरो सरकारकै आउँछ । पानी पर्नासाथ शहरका चोक चोकमा आहाल जम्छ । त्यसपछि धुलो उडेर कुइरो मण्डल हुन्छ । नर्कले पनि नर्क भनेर सराप्ने स्थितीमा देशका सडकहरु छन् ।
कंलकी नागढुंगाको सडकको धुलो, धुँवा, हिलो र जाममा फसेका हरेक अनुहार रिसले आगो ओकल्न तयार भैरहेको हुन्छ । जम्मा ९ किमि सडक, ४ वर्ष भयो । जनताको सराप नखाने कुनै सरकार मन्त्री बाँकी रहेनन् । जनता डाँको छोडेर रुन मात्र सकेका छैनन् । टाउको, मुख, आँखा सब छोपेर प्रत्येक दिन त्यही बाटो हिँड्नु पर्ने सर्वसाधारणको हविगत बयान गरी नसक्नु को छ ।
हिँड्नेलाई सास्ती, गाडीमा गुड्नेलाई सास्ती, वरपर व्यापार गर्नेलाइ्र्र सास्ती, स्थानीय बासिन्दालाई सास्ती कति हो कति । देशको ६५ जील्ला जान प्रयोग हुने यो ९ किलोमिटर बाटोमा हासेको एउटा अनुहार भेटिदैँन । हुन त अनुहार देख्न पाए पो हाँसेको भेटिनु, हरेकको अनुहार ढपक्कै ढाकिएको हुन्छ, अनुहार नढाक्नेहको कपाल, आँखी भौ परेला धुलोले भरीपुर्ण हुन्छ ।
आफ्नै आफन्त र साथी भाईनै चिनिने स्थीती छैन । देशका अन्य सडकको स्थिती पनि लगभग यस्तै हो । सङ्लो र खाल्डा खुल्डी नभएको सडक देख्न मुस्कील नै छ । वर्तमान सरकारका पक्षधरहरु भन्छन्, ५÷६ महिनामा यो सरकारले कसरी यत्रो काम गरोस् । २० औ वर्षदेखि नबनेका, विगारिएका बाटाहरु यो सरकारले ६ महिनामा कसरी बनाउन सक्छ ?
ठिक हो ६ महिनामा देशै भरिका सडकहरु कालोपत्रे वा खाल्डारहित बनाउन ओली सरकारले त के ट्रम्प सरकारले पनि नसक्ला तर २० औ वर्षसम्म देशको ढुकुटीबाट पैसा लिएर गएर कमजोर बाटो बनाउने र त्यस्ता कम्पनीलाई देशका कयौ सडकहरु र संरुचनाहरु बनाउन दिएको दिएई, दिएको दिएई गर्ने मन्त्री, सचिव, डिजी, डिभिजन, इन्जीयिनर ठेकेदार कम्पनीको लिष्ट तयार पार्न ६ महिना लाग्छ ?
२० आँै वर्ष हिलो धुलो खाएर, खुट्टा मर्काएका र फोक्सो भरी रोग पालेका जनताले अधर्मीहरुलाई पाता फर्काएको हेर्नै नपाई मर्नु पर्ने ? यो देशका भौतिक योजना यातायात मन्त्री को को भए ?
कसका पालामा कसरी दिइएको ठेक्का सबै भन्दा निम्न स्तरको भयो भन्ने पत्ता लगाउन र मुलुकको खरर्बौ पैसा सत्यानाश पार्नेलाई कार्वाही गर्न, छ महिना लाग्दैन । एक पटक यो सरकारले भनिदियोस् कि यो यो मन्त्रीले चरम भ्रष्टाचार गरी यी यी सरकारी कर्मचारी र प्राविधिकको मिलेमतोमा यसरी यसरी टेण्डरको नाटक रचेर यो यो सडक पुल भवन बनाएका रहेछन् ।
बारम्बार पुनः तिनै काम खराब गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाइ्र्र यति यति कमिशनको लेनदेन गरेर कारवाही गर्नुको साटो कयौ ठेक्का दिनेहरु यी यी हुन् भनेर सार्वजनिक गरोस् र पाता फर्काओस् । त्यस पछि धुलै धुलो भरीएको हाम्रो फोक्सोले पनि सुन्तुष्टीको सास फेर्छ । तर यति जाबो आँट ,सहास र हिम्मत भएको सरका हाम्रो भाग्यमा कहाँ लेखिएका होला र ।
२ वटा खरिदार, ४ वटा नासु र कागताली परीहाले एउटा कार्यालय प्रमुख समाएर जुंगा मुठार्नेहरुको हुलमा बसेर भ्रष्टाचार अभियोगमा यो देशमा मन्त्रीहरु ठुला ठेकेदारहरु र ठुला ठुला कर्मचारी समातिएलान् भन्ने आश गर्नु त वेष्ट अफ टाइम नै हो तर कुनै दिन लिक्वान यु, मोहम्मद महाथी र जस्ता नेताको क्वालिटी आँट र मुटु भएका एक जना विकासवादी राष्ट्रवादी सपुत सियोर सर्ट जन्मिने छन् भनेर साँझ विहान धुप बाल्नु नै एक मात्र विकल्प हामीसँग छ ।
तैपनि सास रहुन्जेल आश हुन्छ । गत साउन १२ गते भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले भदौ १२ गते भित्र कंलकी नागढुङगा सडक पिच हुन्छ, कालोपत्रे हुन्छ भनेका छन् । आज साउन २४ गते, हो १३ दिन वितिसक्यो । मन्त्री ज्युको भनाई अनुसार अबको १८ दिनपछि कंलकी नागढुङगा सडक कालोपत्रे भैसक्छ ।
मन्त्री ज्यु आजबाट हामी हरेक एपिसोडमा हाम्रो स्कृनमा यसरी काउन्ट डाउन देखाउने छौँ । देशको ६५ जिल्ला जोड्ने कंलकी नागढुङगा सडक कालोपत्रे हुन अब १८ दिन बाँकी ।
आजको दिन गैहाल्यो त्यो दिन भैहाल्यो तपाइसँग अब १६ दिन बाँकी छ मन्त्री ज्यु । जस्ट १६ डेज ।
छोरालाई डाक्टर ईन्जिनियर बनाउछु भनेर बिदेश गएका यी निशानका बुबा र काख रित्तो भएकी आमालाइ समालिने शक्ति दिउन भगवान सङ प्राथना … पूरा हेर्नुहोस
तपाईंको मुटु छुने एउटा कथा जुन पढे पछि सेयर गर्न नभुल्नुहोला, हाम्रो समाजको यथार्थ चित्रण
३ करोड नेपालीलाई खुशिको खबर : नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा, भारत सूचीमै परेन (फोटो फिचर) (18)
यसरी पकाउनुस फर्सिको मुन्टाको तरकारी तपाईंले सधै बनाएको भन्दा सयौं गुना मिठो हुन्छ (14)
नेपालको ईतिहासले न त रवि जस्तो ब्यक्ति हिजो पाएको थियो न त भोली नै पाउने छ। (भिडियो सहित) (14)
क्यान्सर रोगिको लागि खुशीको खवर ! घरमै बसेर जम्मा १६ रुपैयामा यसरी गर्नुस् उपचार (12)
अस्पतालमा भयो धुमधामले विवाह, विदाईपछि श्मशानघाट पुगिन् बेहुली (11)
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (11)
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई छ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस (10)
विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई ५ वर्ष जेल र ५० हजार जरिवाना (10)